Atletisma : kandidà roa hifaninana ho filohan’ny federasiona | NewsMada
Atletisma : kandidà roa hifaninana ho filohan’ny federasiona
Par Taratra sur 10/11/2016
Tsy misy fiovana fa hotanterahina amin’ity volana ity ihany ny fifidianana izay ho filoha hitantana ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA). Roa ihany, araka ny fantatra, no hifaninana, amin’izany toerana izany.
Ny asabotsy 19 novambra ho avy izao, eny amin’ny Hotel Panorama Andrainarivo, ny hanaovana ny fifidianana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny atletisma (FMA). Hatreto raha ny fantatra, tsy misy afa-tsy kandidà roa no nilatsaka hofidina amin’ny toeran’ny filohan’izany federasiona izany.
Hiatrika izany fifaninanana izany Andriamahazo Ramanantsoa Norolalao, filoha am-perinasa, sy Raherison Dominique, filoha lefitry ny ligin’Analamanga,. Raha tsiahivina, izy mianadahy mianaka ireo ihany ny nanao izany, ny taona 2013. Nitovy ny isam-bato azon’izy ireo tamin’izay saingy ny fizokiana no nandresen’ny filoha amin’izao fotoana izao, araka ny lalàna. Nampahafantarin’ny kandidà Norolalao, tamin’ny fomba ofisialy, omaly ireo ekipa miara-dia aminy.
Mandra-piandry izany, nanainga omaly ary nihazo an’i La Réunion ny delegasiona malagasy hiatrika ny andiany faha-41 amin’ny «Marathon relais ST Benoît». Fifaninanana hatao ny zoma 11 novambra izao. 11 miarahalahy izy ireo ny hiatrika izany : Andriamparany Hajanirina, Rakoton­drasoa Fulgence, Mampitraotsy, Rakotoarimanana Hery Tiana, Ranahavintsoa Voninahitsy Clément, Rakotonirina Nicolas, Ralaiari­manana Onjaniaina Hervé Patrick, Rakotomalala Jean de la Croix, Tahianjanahary Tsima, Fitolia, Fanomezantsoa Donné.
Tsiahivina fa efa namdrombaka izany indimy i Madagasikara dia : ny taona 2001, 2002, 2012, 2013, 2014. Votsotra teo amin’ny Malagasy kosa izany, tamin’ny taon-dasa, ka ny hamerina izany ny tanjona amin’ity andiany ity, araka ny nambaran’ny filohan’ny federasiona.